Ukubhukisha imoto ngexabiso elifanelekileyo?
Ukuba ukhona Ndikhangela imoto erentisayo, ngokusebenzisa injini yokukhangela elandelayo ungayifumana into oyifunayo.
Ukucwangcisa uhambo kunokuba ngumsebenzi olula kakhulu okanye, ngokuchaseneyo, nomsebenzi ongaphaya kokungenakwenzeka. Khetha kakuhle indawo oya kuyo, inqwelomoya, ihotele ..., izinto ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo kwaye kufuneka ukhethe kakuhle ukuba ungaziqhekezi. Kuko konke oku kufuneka kongezwe into ebaluleke kakhulu: Senze ntoni ukuba kufuneka sihambe imigama emide okanye sityelele izixeko ezahlukileyo kuhambo lwethu?
Olona khetho luphambili kwezi meko, kwaye olulula kuzo zonke, kukusebenzisa izithuthi zikawonkewonke. Nangona kunjalo, olu khetho lunokusibangela ukuba siphazamise ngakumbi kunaleyo ivela ekuqaleni, kuba siphantsi kothotho lweeshedyuli ezimiselweyo kwaye ixabiso lokugqibela lohambo linokuphakama ngenxa yale meko. Ngokuchasene noko, akusoloko kulula ukuhamba nesithuthi sakho. Senza ntoni ke?
Impendulo yalo mbuzo ilula kakhulu: iimoto eziqeshisayo. Olu hlobo lweemoto luya lunyanzelwa ngabasebenzisi abafuna ukuba nohambo olufanelekileyo ngaphandle koloyiko. Kuyinyani ukuba ukuqesha imoto namhlanje ayisiyonto inomtsalane kubantu abaninzi, abasazazi izibonelelo zayo ezininzi.
Emva koko, siza kukunceda, usombulule amathandabuzo akho kwaye sikukhokele xa uqesha imoto. Ukuba ufuna ukufumana imoto erentisayo ngexabiso elifanelekileyo, kuya kufuneka ucofe apha.
Izibonelelo zokusebenzisa iimoto eziqeshisayo
Njengoko besesitshilo ngaphambili, ukusetyenziswa kwezithuthi zikawonke-wonke kuzisa iziphene ezininzi xa kuthelekiswa neenzuzo ezinkulu esizifumana ngenxa yenyani elula yokuqesha imoto.
Eyokuqala yazo zonke Libertad. Ukuhamba ixesha elide ufuna into entle. Zihambile iinkxalabo zomfo: ihamba nini ibhasi? Kufuneka uthathe phi umgaqo ongaphantsi? Njl, enokuthi ibe yintuthumbo yokwenyani.
Okwesibini, intuthuzelo. Ayifani nokuhamba ngebhasi okanye kwimetro egcwele abantu apho unokugcina khona umthwalo wakho kunokuba luhambo olupheleleyo, kuba kumaxesha amaninzi asinandawo siyifunayo. Nangona kunjalo, ukuba siqesha imoto, zonke ezi meko ziyasuswa.
Esinye isitshixo kukuba, ngaphandle kwamathandabuzo, lo ndolozo. Ukuqesha imoto kunokuxabisa malunga ne-5-15 euros ngemini, into engaphantsi kweendleko zokuthatha iibhasi ezininzi, iiteksi, njl., Ukusuka kwenye indawo uye kwenye.
Zizibonelelo ezithile kuphela zokuqesha imoto ezichaziweyo. Ngokuqinisekileyo, xa uthatha isigqibo sokwenza, uya kubona ukuba zininzi ngakumbi.
Ungayiqasha imoto kwi-intanethi?
Kwilizwe elinobumbano olunje apho i-intanethi iye yaphula yonke imiqobo enokubakho, kufuneka kuthiwe ngokucacileyo ukuba, ngokucacileyo, ukuqesha imoto kwi-intanethi.
Ukuba sichitha ixesha lethu elixabisekileyo sikhangela kunye nekhompyuter okanye i-Smartphone, siza kubona ukuba inethiwekhi igcwele iinkampani ezinikele kweli candelo esinokuthi kuzo sisebenzise iinkonzo zazo ngendlela elula kwaye ngokupheleleyo kwi-intanethi.
Sinokufumana into eyaziwayo abaphandi, owenza umsebenzi wethu ngendlela engakholelekiyo. Ezi zinjini zikhangela phakathi kwezibonelelo ezahlukeneyo ukusibonisa ezona zinomtsalane kwaye zinomdla kuthi.
Phakathi kweenkampani ezibalaseleyo esiboniswayo ibhajethi y umbono. Uhlahlo-lwabiwo mali liziko laseCalifornia elasekwa nge-50s esekupheleni, ngoku engaphezulu koku Iiofisi ezingama-3000 ezikumazwe ayi-128 kwihlabathi liphela. Ngokwenxalenye yayo, i-Avis ichongwa ngokuba inakho ukudityaniswa okubanzi kwezithuthi zazo zonke iintlobo neemeko ukwanelisa nawuphi na umsebenzisi.
Kwaye, ukuya kuthi ga kwiinjini zokukhangela ezikwi-Intanethi, asinakushiya ngaphandle kokukhankanya KAYAK, usetyenziso olukhokelayo olushukumayo olonwabela uvelwano kuninzi loluntu ngokusebenza kunye nokulula. Ungathandabuzi ukuyisebenzisa.
Zisebenza njani iinjini yokukhangela kwi-intanethi?
Un Injini yokukhangela kwimoto ekwi-Intanethi yenye yezixhobo ezilula ukusebenzisa. Kwakhona, phantse zonke ezi nkqubo zisebenza ngendlela efanayo.
Njengoko ubona kwinjin yethu yokukhangela imoto, ibonisa into encinci enezikhewu ezahlukeneyo okanye iibhokisi ezingenanto esinokugcwalisa ngolwazi oluceliweyo.
Ngokwesiqhelo, siyabuzwa indawo apho sifuna ukulanda khona isithuthi. Emva, imihla yokuqokelela kunye nokuhanjiswa efanayo. Kwaye, ekugqibeleni, siya kugqiba nge Iimpawu zemoto uqobo: uhlobo, imodeli, njl.
Ewe kunjalo, kuxhomekeke kwinjini yokukhangela esijongane nayo, kufuneka sinikeze ngolwazi okanye enye, kodwa njengomgaqo ngokubanzi ezi zihlala ziinkcukacha ezifuneka kuthi.
Ngaba ikhadi lekhredithi liyimfuneko ukuqesha imoto?
Ukuqesha imoto ngaphandle kwekhadi letyala kunokuba yinto engenakwenzeka, kuba iinkampani ezenza lo msebenzi zihlala zinobuhlobo kakhulu intlawulo yemali.
Isizathu soku silula. Isithuthi siyabiza, kunzima ukusigcina, ke ngoko ukuqinisekisa ukuba sikwimeko entle emva kokusetyenziswa kubalulekile. Ukwenza oku, benza uhlobo lwe inshorensi ezongezwa kwixabiso lokuqala lokuqasha imoto.
Ezi inshurensi ziya kuhlawulwa kuphela ngumsebenzisi kwimeko apho oku kubangele ingxaki kwisithuthi. Okwangoku, bahlala begadiwe kwinto eyaziwa njenge idipozithi, ayiyonto ngaphandle kokuthintela kokuqala isixa esithile semali efumanekayo ekhadini, eya kuthi ikhutshwe ekuhanjisweni kwemoto ikwimeko efanelekileyo.
Esi sesona sizathu siphambili sokuba amakhadi etyala phantse asoloko esetyenziswa xa kuqeshwa imoto. Kodwa sithi phantse rhoqo, kuba oku kuyatshintsha, kwaye namhlanje kunokwenzeka ukurenta iimoto nge intlawulo yemali kwiinkampani ezithile ezinje, umzekelo, I-AutoEurope.
Ukuqeshisa imoto phakathi kwabantu
Kule mihla, kuye kwavela iinkampani ezintsha ezisebenzisa enye indlela yokusebenza. Ayisengabo ababeka izithuthi zabo kubo, kodwa kunoko bakwenza oko besebenzisa abantu babucala.
Oko kukuthi, abantu abahlukeneyo baqesha iimoto zabo ngenkampani, ngenjongo yokufumana inzuzo. Ngentengiso, baqinisekisa ixabiso kunye nokufumaneka, kwaye amaqela anomdla aqhakamshelane nabo. Umqeshi kunye nomthengi badibana ngokuhanjiswa kunye nokuqokelelwa kwesithuthi, ekufuneka sisoloko sikwisimo esifanelekileyo kunye netanki lamafutha elipheleleyo.
Ngale ndlela ilula, yintoni eyaziwa njenge 'Ukuqeshisa imoto phakathi kwabantu'.
Okokugqibela, ukuba uza kudinga ukurenta imoto ixesha elide kakhulu, mhlawumbi ukhetho lokuqesha iMercedes okanye nayiphi na enye uphawu lweprimiyamu luya kuba ngcono kuba banikezela ngamaxabiso akhuphisanayo kwaye emva kwethutyana unokukhetha ukuvuselela okanye uyibuyise ngaphandle kwesibophelelo.